Saldhig ciidan oo ku yaala dalka Maali oo la kulmay weerar culus. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jun 30, 2018 131 0
Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in rag hubeysan ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala dalkaas, kaas oo ay ku suganyihiin ciidamo wadajir ah oo ka socoda dowladaha saaxilka ee duulaanka kusoo qaaday Maali.
Rag hubeysan oo katirsan mujaahidiinta, islamarkaana aad u hubeysnaa ayaa weeraray saldhig ciidamada dowladaha saaxilka iyo saxaraha ay ku leeyihiin magaalada Siifaari, waxaana goobta ka dhashey khasaare kala duwan.
Saraakiil u hadashey ciidamada la weeraray ayaa sheegay in raga weerarka soo qaaday ay adeegsanayeen sawaariikh iyo hub culus, waxaana ka horeeyay gaari miineysan kaas oo ku qarxay albaabka hore ee saldhiga, sida ay saraakiishu sheegeen.
Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashandhiga dowladda Maali wuxuu shaaca ka qaaday inuu jiro khasaare ka dhashey weerarka, isagoona qirtay in labo askari ay uga dhinteen, balse sida marar badan la arkay, waxay dowladda Maali iyo dowladaha duulaanka ku jooga Maali ka been sheegaan tirada khasaaraha.
Ciidamada ku sugnaa saldhiga ay Mujaahidiintu beegsadeen waxay ka socodaan dowladaha Nayjar, Burkina-Faso, Chad, Maali iyo Murutaaniya, waxayna garab u yihiin dowladda Faransiiska oo kusoo duushey dalkaas muslimka ah.
cusmaan 2810 posts 5 comments
Askarta Jubbaland Oo khasaare ba’an lagu gaarsiiyay Qarax ka dhacay…
Dhageyso Warka duhurnimo Ee Radioalfurqaan.
Axmad	 Jul 12, 2020 0
Askarta Jubbaland Oo khasaare ba’an lagu gaarsiiyay Qarax ka…
Dhalinyaro Soomaaliyeed Oo isticmaalay Dawo Xad dhaaf ah oo ku dhintay…
Al-Shabaab Oo Todobaadkii tagay fuliyay Silsilado Weeraro ah.…